Archive du 20181005
Lisi-pifidianana mampiahiahy Hitarika krizy vaovao
Maro ny olona tao anaty lisi-pifidianana nifarana tamin’ny 15 aprily 2018 no tsy anaty anaty lisitra farany. Tsy mitovy ny isan' ny mpifidy anaty lisitra avoakan’ny CENI isaky ny distrika sy ny fitambaran'ny isa anaty isaky ny lisitry ny birao fandatsaham-bato anaty distrikika, ary misy elanelany be satria misy nesorina na nampiana be dia be, hoy depiote Hanitriniaina Razafimanantsoa tao anatin’ny tambajotran-tseraserany.
Kandida ho filoham-pirenena Mety hisy ho sahirana amin’ny resaka taratasim-piara
Ilay singa maha biometrika ny taratasy fahazoan-dalana hamily fiara sy ny taratasim-piara mihitsy, hoy ny tompon’andraikitra avy eo anivon’ny minisiteran’ny atitany no antony tsy maintsy hanavaozana ireo taratasy rehetra teo aloha.
Vondron’olon-tsotra « Aoka izay ny antsojay ! »
Mitohy hatrany ny fidinana ifotony tontosain-dry zareo avy eo anivon’ny Vondron’Olon-Tsotra (VOT), raha ny nambaran’ny filohany, Sarah Zoe.
Fivoahana dosie maloto Hamotika kandida filoha maromaro
Lasa fomba fiady ny famoahana ny dosie maloton’ireo kandida filoham-pirenena, izay fahita any ampitan-dranomasina tahaka ny any Eoropa.
Ravalomanana tany Toliara “Tsy maintsy mandresy isika”
Tany Toliara ny kandida laharana faha-25 Marc Ravalomanana omaly alakamisy 4 oktobra. Vao tonga izy dia velom-panantenana ny vahoaka nitsena tamin-kafaliana, hany ka lava be ny kortezy nitsena azy teny amin’ny seranam-piaramanidina, efa ho 3 km. Samy namoaka sy niteny ny hetahetany ny olona.
Kandida filoha miisa 22 Manome 24 ora hanavaozana ny lisi-pifidianana
Misy ny fangatahana napetrak’ireo kandida miisa 22 tetsy amin’ny Solimotel Anosy omaly alakamisy 4 oktobra. Manome 24 ora an’ireo fitondrana mahefa sy ny tompon’andraikitra manam-pahefana eto Madagasikara izy mba hanokafana indray ny lisi-pifidianana hampidirana ny lisitry ny olona tsy tafiditra ao kanefa efa feno 18 taona ary manan-jo hifidy.
KMF/CNOE-Fanabeazana olom-pirenena Vaindohan-draharaha ny fampandrosoana an’i Madagasikara
Nampahafantarina tetsy amin’ny Hotely Astauria Antanimena omaly alakamisy 4 oktobra ny fanatontosana ny fanangonan-kevitra FAMAH (FAmpandrosoana an’i Madagasikara Ahoana ny Hevitrao) nokarakarain’ny KMF/CNOE-Fanabeazana olom-pirenena tamin’ny volana septambra teo.
Antoko FAIMA Nitondra am-bavaka ny fiatrehana fifidianana
Amin’ny alatsinainy izao hanomboka amin’ny 6 ora maraina ny fampielezankevitry ny fifidianana ho filoham-pirenena hotontosaina ny 7 novambra izao.
Kandidà ho filoham-pirenena Maro no mivezivezy any ivelany
Ho raikitra ny fampielezan-kevitra ato ho ato ka manararaotra faramparany maka tsodrano any ivelany ireo kandidà “matanjaka”.
Fanaovan-gazety Hohavaozina ny tontolon`ny asa
Mpanao gazety miisa 1 145 no nahazo karatra matihanina raha 1 300 tamin`ny farany teo. Haharitra efa-taona ny fotoana azo ampiasana azy io.
Championnats nationaux du Sport Scolaire 2018 Nahazoam-bokatra ny taranja Atletisma
Ny fifaninanana teo amin’ny taranja atletisma no efa tontosa hatramin’ny farany eo amin’ny fiatrehana ny Championnat Scolaire andiany faha-2 tontosaina any Toliara Atsimo Andrefana ankehitriny.
Volley-Ball Asief Nasionaly Hiatrika ny 1/2-dalana anio ny Trésor sy Mdn ary ny Pzbt sy Men
Taorian’ireo lalao 1/4-dalan’ny taranja Volley-Ball tontosa omaly alakamisy 4 oktobra 2018 tao amin’ny kianja mitafon’ny CRJS
Ho sorona eto indray !
Tsy milamina ny tany ama-monina, ary tsy maniry loza fa toa mandindona ny loza ho an’ny firenena amin’izao.
Handray anjara amin'ny "All African Magazine Music Award" izay atao any Etazonia ilay mpanakanto Malagasy Shyn anio 5 oktobra hatramin’ny 7 oktobra 2018 ho avy izao.
Mitohy hatrany ny fankalazana ny faha-30 taona niakaran’i Bodo sy Rija Ramanantoanina an-tsehatra. Hihaona amin’ny mpankafy izy ireo ary hanampy azy i Nanie izay efa mipetraka any Paris sady mankalaza ny faha-25 taona niakarany sehatra ihany koa.
Famokarana horonantsary sy raki-peo Mihetsika ihany koa ny eny Mahitsy
Tamin’ny faran’ny herinandro teo no nampahafantarin’ireo tompon’andraikitra ao aminy teny Ankatso ny fitsanganan’ny tranom-pamokarana ara-tserasera “Metatron production”
Nahazo taratasy vorontsiloza daholo ireo mpamily fiara eto Madagasikara,
TRANO MAY TENY FARAVOHITRA
Sivy ny isan’ny trano may teny Faravohitra, eo ambonin’ny Somagi. Raha araka ny heno dia niainga tao amin’ny trano fivarota-mofo ny afo rehefa niraraka ny menaka.
Fanitarana ny seranan-tsambon'i Toamasina Mizotra tsara ny asa
Mizotra tsara ny asa fanitarana ny seranan-tsambon'i Toamasina amin'izao fotoana.
Faritra Atsimo Hezahina hisitraka rano fisotro madio
« Fampihenana ny fahavoazana ara-toekarena, vokatry ny loza sy ny tandindon-doza » no lohahevitra nentina nankalazana ny andro iraisam-pirenena ho fanalefahana ny vokatry ny loza voajanahary tamin’ity taona ity, izay natao tao Ambovombe-Androy.
Fokontany Faravohitra Nitrangana hain-trano koa
Nisesisesy mihitsy tato ho ato ny hain-trano teto Madagasikara. Niandoha tamin’ilay famaizan-trano niisa 400 tao Mananjary izany ary nitohy tamin’ny famaizan’ala mirefy 120 ha mahery tao Moramanga ny 2 oktobra teo.
Fokontany Avaratanana Ambatolampy Ambohidroa Nesorin’ny CUA sy SAMVA niaraka ny fako nisavovona
Mitohy ny asa fanadiovana sy fanesorana ny fako eto amin’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra.
Miteny ny teknisianina Mila finiavana ny fidirana amin’ny asa
Jean Jacques Rabako Ralambonirina, talen’ny fampianarana sy ny fikarohana ao amin’ny FIMPIMA (Fikambanan’ny Mpikabary Malagasy) sady mpampianatra amin’ny anjerimanontolo, efa niasa tamina banky saingy efa nisotro ronono no vahinin’ny Fandaharana “Teknisianina” tao amin’ny onjam-peon’ny Top Radio 102.8 fm ny alarobia teo.